Uhlalutyo lweGrabetetric Inkcazo
Yintoni Uhlalutyo lwe-Gravimetric kwi-Chemistry?
Uhlalutyo lwe-gravimetric luqokelelo lobuchule bokuhlalutya ubugcisa bee - laboratory esekelwe kumlinganiselo wobunzima be-analyte.
Omnye umzekelo wendlela yokuhlalutya i-gravimetric ingasetyenziselwa ukucacisa inani le- ion kwisisombululo ngokusungula inani elichanekileyo lenkomfa equkethe ion kwi- solvent ukuze ihlukanise ion ukusuka kwinqanaba layo. Ion iyakhankanywa okanye ikhuphuke ngaphandle kwesisombululo kunye nokulinganiswa.
Olu hlobo lokuhlalutya kwe-gravimetric lubizwa ngokuba yi- graipetry yamanzi .
Enye ifom yokuhlalutya kwe-gravimetric kukukhutshwa kwe-gravimetry . Kule ndlela, amaqumrhu kumxube ahlukaniswa ngokufudumeza ukutshisa ikhemikhali ukutyumba i-specimen. Iimveliso ezivuthayo ziphefumlelwe kwaye zilahlekile (okanye ziqokelelwe), ezikhokelela ekunciphiseni okulinganiselwe ubunzima besampuli esomeleleyo okanye eselwelo.
Isibonelo sokuhlalutya i-Gravimetric Analysis
Ukuze uhlalutyo lwe-gravimetric lube luncedo, imimiselo ethile kufuneka idibene:
Ion of interest kufuneka ikhuphe ngokupheleleyo kwisisombululo.
I-precipitate kufuneka ibe yinto ecocekileyo.
Kumele kube lula ukucoca ulungelelaniso.
Ewe, kukho iphutha ekuhlalutyo olunjalo! Mhlawumbi akuyiyo yonke ion iyakuncipha. Zingaba zingcolileyo ziqokelelwe ngexesha lokucoca. Esinye isampula sinokulahleka ngexesha lokucoca, mhlawumbi ngenxa yokuba idlula kwisihlunu okanye enye ayifumanekanga kwi-filtration medium.
Ngokomzekelo, isilivere, i-lead, okanye i-mercury ingasetyenziselwa ukucacisa i-klorine kuba le zinyithi zingenayo i-chloride engenayo. I-sodium, ngakolunye uhlangothi, yakha i-chloride echithwa emanzini kunamanzi.
Amanyathelo okuHlanywa kweGrabetric
Amanyathelo okunyamekela ayimfuneko kulolu hlobo lohlalutyo.
Kubalulekile ukugxotha nawuphi na amanzi onokukhangwa kwiqumrhu.
Beka into engaziwayo kwindawo yebhotile enesibindi sayo esivaliweyo evulekile. Yela ibhotile kunye nesampula kwi-oven ukususa amanzi. Khuphela isampuli kwi-desiccator.
Ukulinganisa ngokungaqhelekanga ubuninzi bezinto ezingaziwa kwi-beaker.
Dissolve engaziwayo ukuvelisa isisombululo.
Yongeza i-arhente yokumisela kwisisombululo. Unokuba unqwenela ukutshisa isisombululo, njengoko oku kwandisa ubungakanani beengqungquthela zokunciphisa, ukunciphisa ukulahleka ngexesha lokucoca. Ukucoca isisombululo kubizwa ngokuba yi-digestion.
Sebenzisa ukucoca ukucoca ukucoca isisombululo.
Yomile kwaye ulinganise ukuqokelela ukuqokelela.
Sebenzisa i-stoichiometry esekelwe kwi-equation chemical equation ukuze ufumane ubunzima be-interest. Misela ipesenteji eziphezulu ze-analyte ngokuhlula ubuninzi be-analyte ngobuninzi obungaziwa.
Ngokomzekelo, usebenzisa isilivere ukufumana i-chloride engaziwa, ukubala kunoku:
Ubuninzi bechloride engabonakaliyo: 0.0984
Ubukhulu be-AgCl bunqamle: 0.2290
Ekubeni inye i-AgCl iqulethe i-mole i-Cl - ions:
(0.2290 g AgCl) / (143.323 g / mol) = 1.598 x 10 -3 nge- AgCl
(1.598 x 10 -3 ) x (35.453 g / mol Cl) = 0.0566 g Cl (0.566 g Cl) / (isampula ka-0.0984 g) x 100% = 57.57% i-cl kwi-sampuli engaziwayo
Qaphela ukuba bekukho enye inxaxheba yokuhlalutya.
Nangona kunjalo, ukuba isetyenzisiwe sisetyenzisiwe, kubalwa kwakufuneka ukuba kulandelwe ukuba i-mole enye ye-PbCl 2 iqulethe i-moles ezimbini ze-chloride. Kwakhona phawula, impazamo yayiza kukhulula ngokusebenzisa ukhokelo kuba ukhokelo alukho ngokupheleleyo. Ubuncinane be-chloride bekungayi kuhlala isisombululo endaweni yokuchithwa.
Ukuhlaziywa Inkcazelo kwiKhemistry
I-Redox Titration Definition
Yonke Ngelizwe I-Eric Church Church
Kuphi Ukufumana Iimvavanyo Zamahhala ze-GMAT
Imfundiso Yemfazwe Yobulungisa YeCawa YamaKatolika
Uthando e 'Romeo noJuliet'
UKemoshe: uThixo wamandulo wamaMowabhi
NgamaKhaya akho ubuso
IHockey yeOlimpiki ka-1980: Iqela le-USA Roster
Ukuqalisa nge-Photogrammetry: Photoscan
I-Oneonta Admissions Facts
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseEniwetok
I-Bennington College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Imibuzo kaMongameli NgezeMfundo